HomeWararka Ciyaaraha MaantaKooxda PSG oo badalka Kylian Mbappe ka calaamadeysatay Horyaalka Premier League
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
PSG ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay xiddiga Mohamed Salah in uu yahay badalka Kylian Mbappe.
Mbappe ayaa u soo muuqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican jiilkiisa, qaab ciyaareedkiisa ayaa loo arkay inay xiiseenayaan kooxo dhowr ah oo ka dhisan Yurub.
Real Madrid ayaa la sheegayaa inay horseed u tahay saxiixa ku guuleystaha Koobka Adduunka Mbappe laftiisuna wuxuu qirtay inuu soo jiitay kooxda reer Spain waagii hore.
Xiddiga reer France heshiiska uu haatan kula joogo kooxda PSG ayaa dhamaan doona sanadka 2022 iyada oo ay haatan wadahadaladu socdaan si loo ogaado in la kordhin karo iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, waajibaadka qandaraaska ee Neymar ayaa sidoo kale culeys ku noqon doona boorsada kooxda haddii la doonayo in sidoo kale la kordhiyo.
Xaalada dhaqaale ee hada jirta waxay la macno tahay inay macquul aheyn in la awoodo in la haysto labada ciyaartooy.
Haddii Real Madrid ay hesho saxiixa Mbappe, PSG waa inay la soo wareegto bedel kale waxaana lagu soo waramayaa inay u aqoonsadeen Salah bartilmaameedkooda ugu sarreeya.
28 jirkaan ayaa sii waday inuu qaab ciyaareed heer sarre ah soo bandhigo inkastoo Liverpool ay ku dhibtooneyso xilli ciyaareedkan, waxaana uu si wada jir ah ugu sarreeyaa gooldhaliyaha isagoo raadinaya markii seddexaad kabaha dahabka ee Premier League.